I-Semalt ichaza indlela yokufumana iSayithi lakho emva kokuhlaselwa kobubi
Amava amaninzi awakhuselekileyo kumnini wesayithi ukuhlaselwa kakubi kweebhande.Kule meko, abaphuhlisi bakhuthazwa ukuba bahlale bezolile kwaye bafeze ngokufanelekileyo amanyathelo afanelekileyo. UFrank Abagnale, i Semalt Umphathi oyiNtloko wabaPhumelela kwabaThengi, unikezela amanyathelo okufumana ngokutsha isayithi elincinciweyo. Masihambe!
Eyona nto ibalulekileyo, hlola ikhomputer yakho kuyo nayiphi na i-virus. Le nyathelo elungiselelayo elincedaukuba ungabandakanyi ithuba lokuba ikhompyutha yakho ibe ngumthombo wokuhlaselwa ngaphambi kokuba uqale ukufumana indawo. Kule nqaku, ngoko, ukuskenaikhompyutha yakho yendawo yokutheleleka, i-malware okanye ii-virus kufuneka ibe yinyathelo lokuqala. Umzekelo we-scanner virus ogunyazisiweyo yi-EU-Cleanerkwiziko lokubonisana ne-Anti-Botnet, eJamani. Eli nyathelo linceda umqhubi wendawo ukuba asuse nayiphi na i-malware mahhala. Ukongezelela, okuIziko lokubonisana ngokukhawuleza lithumela inombolo yetikiti kunye nedatha yokuqhagamshelana nge-imeyile kumnini wewebhusayithi xa kuthengiswa indawo.
Okwesibini, nayiphina iphasiwedi yomsebenzisi kufuneka ishintshwe. Yinyathelo eliqinisekisa abagculeliawukwazi ukufikelela kwiziko lakho leenkcukacha, iwebhusayithi okanye indawo yewebhu. Amaphasiwedi angaphathwa kwi-web hosting service indawo yomthengi kunye necandelo lolawuloisayithi. Ukongezelela, ukukhuselwa kwephasiwedi kunokuphuculwa ngokufikelela kwi-web space ngokusebenzisa iindlela zokukhusela njenge-Safe File TransferProtocol (SFTP), ukuguqula amaphasiwedi kwezinye iinkonzo kunye nokukhetha amaphasiwedi athile. Amagama aphantsi akufanele asebenziswe njengokubaIiphasiwedi zokulawula ukhuseleko lwewebhu.
Okwesithathu, sebenzisa phpMyAdmin ukusetha kwakhona iphasiwedi yomlawuli wewebhusayithi..Ukuba umnini wesayithi akakwaziukungena kwisigaba somlawuli kwisayithi yabo, abahlaseli bangase batshintshe iphasiwedi okanye bacekise i-akhawunti. Kule meko, iiiphasiwedi kwiinkcukacha kufuneka zitshintshwe. Oku kungafezwa ngokusebenzisa phpMyAdmin kubathuthukisi usebenzisa i-WordPress.
Ukulimala kufuneka kuhlolwe kwisinyathelo esilandelayo sokubuyisela isayithi esithintekayo. Iqukaukuvavanya imeko kunye nokucwangcisa indlela yokuqhuba. Qinisekisa iifayile ezisulelekileyo, nayiphi na ingqinisiso kwiinkcukacha ezibukhali kunye nokufikelelakwisiseko sedatha kwaye ukuba ezinye iisayithi kwi-server yakho yewebhu zichaphazelekayo. Inqubo ingenziwa ngokusetyenziswa kwee-Google Webmaster Tools.
Ngokulandelayo, buyisela ukugcinwa kwemali kwaye ukhangele i-malware. Kulo nyathelo, umnikazi wesayithi kufunekaukuthatha indawo nayiphi na iifayile ezichaphazelekayo kunye nokugcinwa kweefayili ezingakhuselekanga. Ukongezelela, i-database kufuneka ibuyiselwe kwi-backup ukuba kungenzekaukuba abahlaseli bafikelele kwi database abanakho ukukhutshwa ngaphandle. Khawukhumbule nje, ezibini ezibalulekileyo ziyi-Joomla kunye ne-WordPress.
Ukuhlaziya izihloko, iifowuni, izandiso kunye nezicelo. Hackers kaninzi zisebenzisa isebenziimingxuma kwandiso, iplagin, kunye neempendulo. Ngaloo ndlela, ngokukhawuleza ukuba i-backups ibuyiselwe, zonke izimbobo ezikhuselekileyo kufuneka zivaliwe ngokuhlaziywazonke izihloko, izandiso kunye nezicelo. Nganye yeziplagi zichaphazela ukhuseleko lwesayithi.
Ekugqibeleni, sebenzisa ukususa isayithi kubalandeli bamnyama. I-Yahoo, i-Google kunye ne-Bing igcinaabadlali abamnyama kwiindawo ezitheleleke ngeentsholongwane. Naliphi na indawo ebekwe kuluhlu lwamnyama lwe-Google, umzekelo, uhlwaywa ngesimo esiphantsi okanye ususwekwi-index yosesho. Ngaloo ndlela, emva kokungenisa izixhobo ezicoca ezicocekileyo kunye nokuguqula iiphasiwedi, yazisa iinjinjini zokukhangela ukuba zisuswe kumalungu amnyama.
Ekugqibeleni, ukuhlaselwa kweziza kuyingxenye yehlabathi langoku. Ukuba isayithiiqhutywe, abaphuculisi banokuziva bathuka. Ngeli xesha, kubalulekile ukuhlala uxolo ekubeni ngoku uyazi ukuba wenzeni kwaye uphumeleleiwebhusayithi.